/Blog/Gallery/Ahoana ny fiasan'ny Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) ho an'ny mpamorona vatana
Posted on 11 / 18 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
1. Inona ny atao hoe Pyridoxal Hydrochloride?
Pyridoxal Hydrochloride na vitaminina B6 dia otrikaina-matsiro azon'ny rano tsy fahita matetika amin'ny sakafo. Ampiasaina indrindra amin'ny alàlan'ny sakafo mahavelona.
Rehefa ampiasaina ho fanampin-javatra hafa dia afaka mitsabo na misoroka olana ara-pitsaboana maro ny Pyridoxal Hydrochloride. Matetika dia alaina amin'ny tsindrona, na am-bava na amin'ny sakafo manina.
Raha mpanamboatra vatana ianao, dia mety ho anao io otrikaina io satria manana fiasa mahasoa maro amin'ny vatana izy io. Ohatra, manampy ny vatanao amin'ny fanaovana lipida, karbônina sy asidra amine izy rehetra izay ilaina amin'ny fampitomboana ny vatana tsara indrindra.
Ny loharanom-pahalalana mahazatra an'ny pyridoxine hydrochloride vitamin B6 ao amin'ny sakafo dia misy voamaina, akoho / turkey, legioma sy voankazo.
2. Fa maninona no mila otrikaina ny bodybuilders - pyridoxine Hydrochloride?
Fa maninona no zava-dehibe ny otrikaina amin'ny bodybuilders? Mba hahavitanao ny asa rehetra anananao ao anatin'ny iray andro, dia tsy maintsy mamelona ny vatanao amin'ny otrikaina mahavelona maro ianao. Ny tsy fahampian-tsakafo amin'ireto otrikaina ireto dia hiteraka fahatapahana amin'ny làlan'ny metabola anao. Io dia hitarika ho amin'ny fahombiazan'ny asa mahomby sy ny asa ratsy.
Amin'ny maha-bodybuilder anao dia mila sakafo betsaka kokoa ianao noho ireo izay mitaky ny fiainana mazàna. Ny B-6 pyridoxine hydrochloride dia manan-danja manokana ho anao satria fepetra takona ao amin'ny phosphorylase hozatra, hetsika mifamatotra amin'ny metabolism glyogen. Raha fintinina dia mila vitaminina B6 ianao amin'ny metabolism mahasalama. Ny Vitamin B6 dia manatsara ny fiasan'ny enzyme izay mandray anjara amin'ny fanimbana ny proteinina.
Ny fiantraikan'ny pyridoxine hydrochloride ao amin'ny vatana dia misy ifandraisany kokoa amin'ny andraikiny amin'ny proteinina proteinina. Izany no antony rehefa mampiasa azy io dia tsara ny mandany sakafo maraina misy proteinina alohan'ny hikapohana ny gym. Azonao atao ihany koa ny mandray sakafo manankarena misy proteinina mandritra ny fotoam-piofanana mialoha, raha mbola manao fiofanana ianao, aorian'ny fiofanana ary alohan'ny hatoriana.
Na izany aza, tsy midika izany fa tsy miraharaha sakafo hafa ianao. Mila vatanao mineraly ilaina hafa ny vatanao mba hampiasa tsara sy hiarovana anao amin'ny aretina.
3. Inona no vokatry ny Pyridoxine Hydrochloride ho vitaminina amin'ny fahasalaman'ny vatana?
Ny antony ilainao ny maka B6 be dia be dia be ny antony mahatonga azy hanana fihetseham-po simika maro izay misy asidra amine sy proteinina.
Amin'ny maha-bodybuilder anao dia mila azy bebe kokoa ianao amin'ny fiforonan'ny sela mena-mena. Tokony hampitomboina kokoa ny sela mena ianao hanitanao ny famongorana ny rano ary hiantohana ny fahazoana oksizenina ampy ho an'ny vatanao.
Antony iray hafa ilainao ny B6 dia manatsara ny haavon'ny fanoherana ny adin-tsaina. Ny B6 dia manamboatra vy ao amin'ny sakafontsika ho azo kokoa. Mila vy sy hangeja (oxygen) bebe kokoa ny hozatrao mba hiaretanao ny adin-tsaina.
Ianao koa mila angovo betsaka mandritra ny asa any ivelany. Ny pyridoxine hydrochloride dia mahasoa ny vatanao amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny tahan'ny fandoroana gliosida ao amin'ny selao. Izany dia miantoka fa mahazo angovo ampy ianao.
Mandritra ny fiofanana dia hisy fihenjanana amin'ny fizotran'ny angovo vatana. Hisy ihany koa ny fiovana amin'ny sela vatanao vokatry ny hetsika mavesatra. Ankoatr'izay, ianao dia hamoy otrikaina betsaka amin'ny feces, urine, ary hatsembohana noho ny fitomboan'ny metabolism.
Noho ireo antony ireo, mila mamerina mameno ny otrikaina ao amin'ny vatanao ianao. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny famatsiana otrikaina mba hitazomana sy fanamboarana ny fitobizanao. Izany dia hiantoka ny fikambanan'ireo sela ho mijanona sy matanjaka. Tsy misy tambiny tsaratsara kokoa afa-tsy ny pyridoxine hydrochloride vitamin B6 rehefa te-hanangana indray ny hozatry ny vatanao.
4. Ny tantaran'ny Pyridoxal Hydrochloride
Pyridoxal Hydrochloride (65-22-5) dia vita voalohany tao 1939 saingy hita tao 1934. Paul Gyorgy, dokotera Hongria no nahitana azy. Nataony hoe vitaminina B6 izany ary nampiasa azy io hanasitranana ny dermatitis acrodynia, endrika hoditra amin'ny voalavo.
Dimy taona taorian'ny nahitany azy dia nisy siansa iray hafa, Samuel Lepkovsky nahavita nanasaraka azy tamin'ny vary bran ho azo pyridoxine hydrochloride vovony.
Ao amin'ny 1939, ny Folkers sy Harris dia namaritra ny firafitry ny pyridoxine. Enina taona taty aoriana, nasehon'i Snell fa manana endrika roa ny B6: pyridoxamine sy pyridoxal. Ny anarana hoe Pyridoxal Hydrochloride dia tonga satria ny otrikaina B6 dia miorina amin'ny pyridine homamiadana.
Androany, ny World Health Organisation dia ahitanaPyridoxal Hydrochloride ao amin'ny lisitry ny fanafody tena ilaina. Izany dia satria raisin'izy ireo ho anisan'ireo fanafody azo antoka sy mahomby indrindra amin'ny rafi-pitsaboana. Hita ao amin'ny counter sy amin'ny fitsaboana ho an'ny jeneraly izany.
5. Fatra amin'ny Pyridoxal Hydrochloride ho an'ny bodybuilders
Amin'ireo B-bitamina, ny Pyridoxal Hydrochloride no zava-dehibe indrindra ho an'ny fahasalaman'ny vatana sy ny aretin-tsaina. Manampy amin'ny fitomboan'ny sela vaovao izany, raha ny fanazavana Pyridoxine hydrochloride bodybuilding fahaizana. Ny B6 koa dia manampy amin'ny fandanjanana ny potasioma sy ny sodium, ary amin'ny fanamboarana asidra amina, ny ADN ary ny RNA izay anisany koa.
Ny vehivavy dia afaka mampiasa azy io mba handanjalanja ny hormonina ary manampy amin'ny hery fiarovana mandritra ny fitondrana vohoka. Izy io koa dia miady amin'ny fitazonana tsiranoka premenstrual ary manamaivana ny fanaintainan'ny fadimbolana sy ny mony.
Ny tsy fahampian'ny Pyridoxal Hydrochloride dia mitarika ho mikorontana, tsy mora tohina, tsy mifandrafy, fahalemena, lela mivalona, ​​fantsika malemy, aretin'andoha ary osteoporosis.
Ny fatra natolotry ny FDA dia 2mg, fa miaraka amin'ny fanampin-tsakafo, ny fatra mahazatra dia 20mg. Ny pyridoxal Hydrochloride dia mety ho poizina rehefa maka mihoatra ny 2000mg.
Na izany aza, araka ny fikarohana iray dia tsy ampy ny fatra Pyridoxal Hydrochloride ankehitriny izay natolotry ny governemanta amerikana ho an'ny olona mavitrika.
Midika izany fa ireo izay mametra ny vondrona sakafo na mametra ny kalôria dia mety hiharan'ny tsy fahampiana. Noho izany, mety tsy hahazo tombony amin'ny vokatry ny pyridoxine hydrochloride izy ireo raha tsy maka ny fatra araka ny natolotry ny governemanta.
Miorina amin'ny valin'ity fikarohana ity dia ho tsara ny manontany amin'ny manam-pahasalamana momba ny fahasalamana anao mba hanampiana ny hamaritana ny fahazoana pyridoxine hydrochloride bodybuilding tsara indrindra / ampy.
6. Fampiasana Pyridoxal Hydrochloride
Tsy misy ny tsy fahampian'ny vitamina B6 any Etazonia, fa ny fahantitra sy ny ankizy kosa no tena atahorana. Raha miatrika aretina toy ny hyperthyroidism, celiac disease, aretina autoimmune, aretin'ny voa, na tsy miankina amin'ny alikaola ianao dia tandindomin-doza kokoa noho ny tsy fahampiana bitika B6.
Tsy afaka mamokatra otrikaina B6 ny vatana, noho izany dia tsy maintsy omenao sakafo fanampiny na sakafo ianao. Ilaina ny mandany be dia be amin'ny vitamina mba hitsaboana sy hisorohana ny aretina mitaiza ary ho an'ny fahasalamana tsara.
Ireto misy fampiasana siantifika pyridoxine hydrochloride siantifika sivy:
(1) Mampihena ny soritr'aretin'ny famoizam-po sy manatsara ny fahatsiarovana
B-6 pyridoxine hydrochloride mitana andraikitra lehibe amin'ny fanaraha-maso ny alahelo. Izany dia satria miteraka neurotransmitter izay mifehy ny fihetseham-po. Ny pyridoxine hydrochloride ho an'ny bevohoka dia tena zava-dehibe ho an'ny vehivavy izay miondrika ara-pihetseham-po na manana fihenan-tsaina mampihetsi-po vokatry ny tsy fahampian'ny hormonina mandritra ny fitondrana vohoka.
Ny B6 dia mampihena ny haavon'ny rà homocysteine, asidra amina tompon'andraikitra amin'ny olana ara-tsaina toy ny fahaketrahana. Ny fandalinana maro dia misy ifandraisany amin'ny soritr'aretin'ny fahaketrahana miaraka amin'ny pyridoxine hydrochloride ambany ao anaty ra.
(2) Mampihena ny risika Alzheimer ary mampiroborobo ny fahasalaman'ny atidoha
Ny otrikaina B6 dia fantatra amin'ny andraikiny amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny atidoha sy ny fisorohana ny aretina Alzheimer. Mampihena ny haavon'ny homocysteine ​​ao amin'ny ra izany ka mampihena ny loza ateraky ny fahatsiarovana ny fahatsiarovana sy ny Alzheimer.
Ny fandinihana iray izay nahitana ny olon-dehibe 156 izay misy fihenan-tsiran'ny fahatsiarovan-tena sy ny haavon'ny homocysteine ​​amin'ny rà dia nahitana fa ny fatra pyridoxine hydrochloride avo dia mihena ny haavon'ny homocysteine ​​ao amin'ny ra ary koa mampihena ny fanimbana ny faritra sasany ao amin'ny atidoha izay tandindomin-doza ny Alzheimer.
(3) Misoroka sy hitsaboana ny rivo-doza
Ny Vitamin B6 dia manakana sy mitsabo ny anemia izay vokatry ny tsy fahampian'ny azy. Izany dia satria mitana andraikitra amin'ny famokarana hemoglobin. Ny hemoglobin dia mitondra oksizenina ho an'ny sela vatana. Noho ny hôlôlôbia ambany dia ambany, ny selao dia tsy mahazo oksizenina ampy ary vokatr'izany dia hivoatra ny anemia ianao ary mahatsiaro reraka na malemy.
Ny tahan'ny otrikaina B6 ambany dia mifandray amin'ny anemia, indrindra amin'ny vehivavy raha miteraka ny fiterahana na ireo bevohoka.
(4) Fitsaboana ny Sintomasin'ny premenstrual Syndrome (PMS)
Ny iray amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny pyridoxine hydrochloride dia afaka ampiasaina hitsaboana ny soritr'aretin'ny PMS ao anatin'izany ny fahasosorana, ny hakiviana ary ny tebiteby. Ny mpikaroka dia mino fa ny vitaminina B6 dia afaka mitsabo ireo soritr'aretina ireo satria mamorona ny neurotransmitter izay manampy amin'ny fitsipi-pitenenana.
Tao anatin'ny fandinihana kely iray dia hita fa ny soritr'aretina PMS ao anatin'izany ny tebiteby, ny fahasosorana, ary ny fiovan'ny rivotra dia azo atao ny mampihena tanteraka amin'ny alàlan'ny maka 200mg magnesium miaraka amin'ny 50mg amin'ny vitamin B6 isan'andro.
(5) Fitsaboana ny lozika mandritra ny fitondrana vohoka
Nandritra ny am-polony taona maro, ny vitaminina B6 dia nampiasaina ho an'ny fitsaboana amin'ny fahosotra ary mandoa amin'ny vehivavy bevohoka. Rano iray ihany koa ny Diclegis, fanafody ampiasaina amin'ny fitsaboana ny aretina amin'ny maraina. Ity dia anisan'ireo tombony azo avy amin'ny pyridoxine hydrochloride ho an'ny vehivavy mijaly noho ity fepetra ity mandritra ny fitondrana vohoka.
Ny fatra pyridoxine hydrochloride havanana amin'ny fitondrana vohoka dia miovaova amin'ny olona iray. Ny fandinihana natao momba ny vehivavy bevohoka 342 dia nahita fa ny fatra 30mg isan'andro ny vitaminina dia mampihena ny fahatsapany ny nausea vao dimy andro taorian'ny nanombohan'ny fitsaboana.
Ao amin'ny fandinihana iray hafa izay misy ny vehivavy bevohoka 126, mihena ny fivoaran'ny nausea sy ny fandroana amin'ny alàlan'ny fandraisana 75mg amin'ny vitamin B6 isan'andro. Ny soritr'aretina nihena 41% aorian'ny efatra andro dia mampiseho ny fahombiazan'ny pyridoxine hydrochloride mandritra ny fitondrana vohoka.
(6) Mampihena ny risika amin'ny aretim-po amin'ny alàlan'ny fisorohana ny aretin'ny clogged
Ny pyridoxine hydrochloride dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fisorohana ny fanodikodinana amin'ny lalan-drà ka hampihena ny mety hisian'ny aretim-po. Raha manana be dia be ny vitaminina B6, ny fahazoanao ny aretim-po dia saika avo roa heny raha oharina amin'ireo izay manana ambaratonga ara-dalàna ao amin'ny ra. Ny otrikaina B6 dia mampihena ny mety hisian'ny fihenjanana amin'ny lalan-drivotra amin'ny alàlan'ny fihenan'ny haavon'ny homocysteine ​​ao amin'ny ra.
Ao amin'ny fandinihana iray izay nahitana ny voalavo tsy ampy vitaminina B6, dia hita fa manana fatran'ny kolesterola avo lenta izy ireo ary manamboatra lesoka ihany koa. Ireo dia mety hiteraka fanakanana arterial raha toa ka voan'ny homoseosezine izy ireo. Ny fikarohana sasany mahakasika ny olombelona dia nahitana ihany koa fa ny vitaminina B6 dia afaka misoroka ny aretim-po.
(7) Fanampiana amin'ny fisorohana ny homamiadana
Ity angamba no manan-danja indrindra pyridoxine hydrochloride ampiasaina nomena ny fihanaky ny homamiadana ankehitriny. Raha mihinana ampy Pyridoxine hydrochloride ianao, hihena ny mety hisian'ny kansera sasany. Ny antony mahatonga izany tsy mazava nefa ny mpikaroka dia mino fa mifandray amin'ny fahaizan'ny B6 hiady amin'ny fivontosana izay miteraka aretina mitaiza toy ny homamiadana.
Rehefa avy nandinika ny fanadihadiana 12, ny mpikaroka sasany dia nanatsoaka hevitra fa ny haavon'ny rà B6 dia ampy miaraka amin'ny risika ambany kokoa amin'ny fivoaran'ny homamiadana colorectal. Raha manana haavo B6 avo lenta ianao, ny fahazoana ny homamiadana colorectal dia hihena ho 50% raha oharina amin'ireo manana ambany dia B6.
Nandritra ny fikarohana sasany natao mba hamaritana ny fifandraisan'ny haavon'ny pyridoxine hydrochloride sy ny homamiadana, dia hita fa ny tahan'ny B6 ampy amin'ny rà dia mampihena ny mety hisian'ny kansera amin'ny nono, indrindra amin'ny vehivavy postmenopausal.
(8) Misoroka ny aretin-maso ary manosika ny fahasalaman'ny maso
Ny otrikaina B6 dia manampy amin'ny fisorohana ny aretina amin'ny maso, indrindra fa ireo mifandraika amin'ny fahanterana - ny fahasimban'ny macular mifandray amin'ny taona (AMD). Rehefa manana homocysteine ​​avo dia avo ny ranao, dia mety hahita risika kokoa ianao amin'ny fampandrosoana ny AMD. Ny pyridoxine hydrochloride dia manampy amin'ny fampihenana ny fisandratana homocysteine ​​avo ao anaty ra ka hampihena ny loza ateraky ny AMD.
Araka ny fanadihadiana iray natao tamin'ny vehivavy 5,000 mihoatra ny vehivavy dia hita fa ny fatra isan'andro vitaminina B6 miaraka amin'ny vitaminina B12 ary asidra folaky dia mampihena ny mety hisian'ny AMD hatramin'ny 40%, raha oharina amin'ireo tsy maka ireo vitamina.
Ny fikarohana iray hafa dia mampifandray ny olan'ny maso amin'ny haben'ny ra; indrindra fa ny olana amin'ny maso izay mitarika amin'ny fanakanana ny lalan-drà mifandray amin'ny retina. Ny haavo pyridoxine hydrochloride ambany dia misy ifandraisany amin'ny fikorontanan'ny retina.
(9) Fitsaboana ny aretim-panafody Rheumatoid
Raha mijaly amin'ny aretin'ny Rheumatoid Arthritis ianao, ny fandraisana B6 dia ahafahana mampihena ny fanaintainanao. Ny arthritis dia mampihena ny haavon'ny B6 ao amin'ny vatana ary mila fanitsiana io mari-pahaizana io.
Ny fandinihana natao tamin'ny olon-dehibe 43 dia nahitana fa ny fatra isan'andro ahitana ny 5mg asidra folic ary 100mg an'ny B6 dia nampidina ny haavon'ny molekiola be karama ao amin'ny vatany taorian'ny herinandro 12.
7. Ny vokatry ny Pyridoxal Hydrochloride
Ny pyridoxine hydrochloride dia azo ampiasaina amin'ny mpamorona bodybuilders. Azo antoka ihany koa amin'ny fampiasana ara-pitsaboana. Na izany aza, misy fiantraikany hafa amin'ny olona samy hafa Ny sasany amin'ny lafiny pyridoxine hydrochloride dia misy:
Famantarana fanehoan-kevitra toy ny fahasarotana amin'ny fofonaina, hombo, mamontsina ny molotrao, tarehy, tenda na lela
Mihena ny fahatsapana fihenan'ny hafanana, ny mari-pana ary ny fikasihana
Mahatsiaro reraka na mitehaka any an-tananao
Ny fatiantoka na ny fifandanjana
Maloilom-panetren-tena na mirohondrohona, mibontsina na may fahatsapana hafanana eo amin'ny tongotra sy ny tanana
Ny alahelo manodidina ny vavanao na ny tongotrao
Ny fihetseham-po amin'ny tara-masoandro
Raha mahatsapa ny fiantraikany amin'ny pyridoxine hydrochloride mahery ianao dia tsara kokoa ho anao ny mitady fitsaboana.
8. Inona no fampitandremana sy fitandremana ho an'ny Pyridoxal Hydrochloride?
Ny fatra avo lenta amin'ny Pyridoxal Hydrochloride dia mety hiteraka aretin-kozatra. Ireo fikorontanana ireo dia mety hitarika olana amin'ny fahatsapana farany sy ny fahatsapana fahatsapana ho an'ny tongotra. Misy ihany koa ny tatitra momba ny fatra avo lenta amin'ny pyridoxine hydrochloride mety mitarika fanehoan-kevitra amin'ny hoditra. Soa ihany, rehefa mijanona ny fatra avo ianao dia ho sitrana tanteraka.
Tsiahivina fa tsy mahazo fatra avo ny zava-mahadomelina mandritra ny fitondrana vohoka. Dokotera manam-pahaizana irery ihany no tokony hamantatra ny fatran'ny Pyridoxine hydrochloride raha bevohoka. Mariho koa fa mpanamboatra vatana ianao na tsia, dia tsy tokony handray mihoatra noho ny 100mg ny pyridoxine hydrochloride isan'andro raha tsy efa niresaka tamin'ny mpamatsy fitsaboana anao ianao.
Rehefa eo amin'ny fanafody Pyridoxal Hydrochloride ianao dia tsy tokony hijanona, manomboka mampiasa azy miaraka amin'ny zava-mahadomelina hafa, na miova ny fatra raha tsy eken'ny mpiasan'ny fahasalamana anao.
Na dia tsy nahalala fifandraisana mahery vaika na mafy aza i Pyridoxal Hydrochloride, dia tsara foana ny mitandrina.
Ny Cordarone (Amiodarone) dia mampitombo ny fahamailinana amin'ny tara-masoandro rehefa miaraka amin'ny B6. Ity fitambaran-javatra ity dia mety hampitombo ny voka-dratsin'ny fanaintainan'ny aretin-koditra, ny fiakarana, na ny fiposahan'ny masoandro amin'ny faritra efa miharihary. Aza hadino ny mitafy akanjo fiarovana na sunblock rehefa maka an'io fampifangaroana io.
Ny vatanao dia mandrava an'i Luminal (Phenobarbital) hialana aminy. Ny pyridoxal hydrochloride (65-22-5) dia mampitombo ny tahan'ny fihenan'ny Luminal ka hampihena ny fahombiazan'ny vatanao.
Tahaka ny Luminal, Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) manapotika ity simika io mba hamongorana azy amin'ny vatanao. Ny maka fangaro miaraka amin'i Dilantin sy Pyridoxal Hydrochloride dia hampihena ny fahombiazan'ny teo aloha amin'ny vatanao. Izany dia mety hampitombo ny voka-dratsin'ny fahitana anao.
Ireo fanafody hafa mifandraika amin'ny Pyridoxal Hydrochloride dia ahitana:
Pyridoxal Hydrochloride dia manana fifandraisana malemy misy fanafody hafa mihoatra ny 70. Noho izany, alohan'ny hampiasana ny zava-mahadomelina enti-miasa, alao antoka fa hifandray amin'ny serasera ianao.
Ny B6 dia miasa tsara miaraka amin'ny B-otrikaretina MCT hafa, Mijery, zinc, sodium, potasioma, magnesium, ary otrikaina C.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny Pyridoxal Hydrochloride ho an'ny bodybuilders dia maro. Tsy mpanao bodybuilders, ny mpanao fanatanjahantena lehibe rehetra kosa tokony hanana io otrikaina io amin'ny tahiry. Na izany aza, tokony hampiasainao amin'ny fifandroritana mafy amin'ireo fatra natolotr'ireo dokotera mpitsabo.
Ny asa mafy be amin'ny fampiroboroboana ny vatana dia mitarika ny fanesorana ireo sela amin'ny hozatra sy ny hozatra. Tsara kokoa ny manolo ireo mampiasa menaka B6 betsaka. Rehefa mividy a Pyridoxal Hydrochloride vokatra, miantoka anao amin'ny loharano malaza toa ny Aasraw. Mba hividianana hyyrchloride Pyridoxine ara-dalàna, tsidiho fotsiny ny aasraw.com anio ary manaova baiko.
1 Osswald, H, et al, 1987 Ny fitarihan'ny sodium ascorbate, menadione sodium bisulfite na pyridoxal hydrochloride amin'ny hetsika poizina sy antineoplastika N-methylformamide ao amin'ny leukemia P 388 na sarcoma M 5076 amin'ny mice Toxicology 43 (2) PMID: 183
2 Reimer, LG, et al, 1983 Ny fiantraikan'ny pyridoxal amin'ny fitomboan'ny «streptococci» hafa ara-tsakafo ara-tsakafo sy ny bakteria hafa amin'ny ram-borona ho an'ny ondridolojika sy ny areti-mifindra 1 (4): 273-5 PMID: 6667606
3 Zygmunt, WA, et al, FIVORIANA 1962 D-CYCLOSERINE INHIBITION FIVORIANA BACTERIAL BY ALANINE Journal of bacteriology 84 (1): 154-6 PMID: 16561951
Ahoana no anampian'ny Flibanserin vehivavy iray ho toy ny hormonina firaisana ara-nofo	Synephrine HCL Powder - kitapo matavy ary fihenan'ny lanjany